Naples, Marco Island uye Everglades CVB Executive Director vachidzika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Naples, Marco Island uye Everglades CVB Executive Director vachidzika
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Jack Wert, anozivikanwa musoro weCollier County's Tourism Division akazivisa zvirongwa zvekusiya basa, kutanga kwaGunyana 30, 2021.
Vakuru vanoremekedzwa uye vane ruzivo rwakakwana vakabata chinzvimbo chavo seManeja Director muCollier County kubvira 2002.
Wert akaita chinzvimbo chakakosha mukukosha kweindasitiri inoenda kune kugona kwehupfumi kweCollier County neSouthwest Florida.
Wotarisira wedhipatimendi anochinja kuenda kuna Paul Beirnes uyo arikushandira seMutevedzeri Wemutungamiriri weCVB.
Naples, Marco Island uye iyo Everglades CVB inozivisa kuti Jack Wert, anonyanya kuzivikanwa musoro weCollier County's Tourism Division akazivisa zvirongwa zvekusiya basa, kutanga kwaGunyana 30, 2021.
Mukuru anoremekedzwa zvikuru uye ane ruzivo rwakakwana akabata chinzvimbo chake seManeja Director muCollier County kubvira 2002. Munguva yehutongi hwake akasimudzira chimiro chekwaienda zvakanyanya, achiunza Southwest Florida dombo kunzvimbo yaro yazvino seimwe yepamusoro yepamusoro uye yekufamba nzvimbo dziri muhutungamiriri hwakadzikama hweUS Wert uye nehunyanzvi hwekushambadzira zvakagadzira zvakakoshera, zvine mutsindo pahunhu hwehupfumi hwenharaunda, kuwedzera kushanya ne53%. Iyo yekuenda parizvino inogamuchira pamusoro pe2M vashanyi pagore.
Wert asinganetsi wekushambadzira uye indasitiri yekushanya imo, munyika nepasirese, Wert akaita chinzvimbo chakakosha mukukosha kweindasitiri inoenda kune kugona kwehupfumi kweCollier County neSouthwest Florida. Mushure mekuzvipira kwegumi nerimwe-gumi mukusika uye kukura kweSeminole County Florida CVB, Wert akachinja bhizinesi rake nekugona kushambadzira akananga kunetso nyowani muCollier County. Tumira 9/11 kukanganisika kune indasitiri yekufamba kwaida kubira uye kushingairira kukunda. Akanga ari mubatsiri wemapurojekiti akati wandei epamusoro anosanganisira kumisikidza-kuzadza uye mushandirapamwe wekushambadzira wakasimudzira kuenda kune imwe nhanho yehunyanzvi, uye kutyora pasi nekuvhura kwe $ 150 miriyoni yeParadise Coast Sports Complex. Mapurojekiti ese ari maviri anoisa kwairi kuenda kumberi uye pakati pevateereri vatsva venyika uye vekunze.
Akaitawo chinzvimbo chakakura munharaunda nenharaunda dzinovimba nekushanyirwa kwehupenyu hwavo kuburikidza nekuedza kwake kusaneta uye zvirongwa mudambudziko reCOVID-19. Kubudirira kwake kwakamuita iye anoziva zvakanaka mumahofisi ehurumende capitol muTallahassee uye paCapitol Hill muDC semumiriri weiyo indasitiri. Nharaunda yakatsiga uye shasha yekushanya, Wert anga ari pamabhodhi mazhinji eDirector anosanganisira VISIT Florida, Destinations International, Destinations Florida, Florida Gulf Coast University's Resort & Hospitality School uye SKAL International Southwest Florida, pakati pevamwe.
Dambudziko rekupedzisira redenda reCOVID-19 rakasimbisa hunyanzvi hwake nehutungamiriri apo aifamba nekwaari kuenda kuburikidza nekuderera kwezvehupfumi uye pakupedzisira kuvhurwa kwenzvimbo yekufamba uye yekushanya kwenzvimbo.
Pfungwa dzebasa raWert dzinosanganisira kukudzwa neHSMAI's Akanyanya Kujairika Pfungwa muKutengesa & Kushambadzira mubairo. Anobata zita re Certified Destination Management Executive (CDME), uye Professional muDestination Management (PDM).
"Mashoko haagoni kuratidza manzwiro andinonzwa nhasi, apo ini ndichibva panzvimbo yangu paCVB ndotanga matanho matsva andanga ndichironga kwekanguva ikozvino," akadaro Naples, Marco Island, Everglades CVB Executive Director, Jack Wert. “Ndinodada nezvandagona kuzadzisa paCVB neindasitiri iyi, uye ndiri kutarisira kubatsira mukubudirira mune ramangwana muindasitiri yekushanya. Kukosha kweindasitiri iyi semutyairi wezvehupfumi kumatunhu nehurumende hakungarambike uye zvino ndave kuzokwanisa kuteedzera nyaya dzakakosha idzi mune ramangwana. ”
Kutarisa kwedhipatimendi kuchachinjira kuna Paul Beirnes, mushambadzi wedu ane mukurumbira wekushandira uyo arikushandira seDeputy Director weCVB, pamwedzi mitatu iri kuuya, kutanga muna Chikunguru 1, 2021. Beirnes yakabatana Naples, Marco Chitsuwa, Everglades CVB muna Mbudzi 2020 seMutevedzeri weMutungamiriri weVashanyi zvichitevera 35-gore rebasa mukati meKushambadzira indasitiri inotora hutungamiriri hutungamiriri neiyo Walt Disney Kambani, Shanyira Orlando, uye Hilton Corporate.